INDEX YOKUQUKETHWE - AmaGeofumadas
Leli khasi kusakhiwa, ngifuna uhlobo esetshenziswa izihloko Blog; nakuba kule post ungabona uhlele zonke izinhlelo uGeofumadas akhulume ngazo.
I-AutoCAD Civil 3D
Ukuqeqesha kanye nezincwadi
Ezinye imikhiqizo ye-AutoDesk
Ukucaciswa kwe-Google Earth
Ezinye imikhiqizo ye-Bentley
Mayelana ne-GIS ejwayelekile
Izihloko lapho kukhonjisiwe khona
Indlela yokwenza ngayo nge-gvSIG
Ukuqeqesha kanye nezinkomfa
Ucwaningo kanye nemishini
Ukuhlola usebenzisa i-AutoCAD
Ukuhlola usebenzisa i-Microstation
Ukuhlola izincwadi kanye nezifundo
Ukusetshenziswa kwe-GPS kuselula
Izihloko lapho kukhulunywa khona i-GPS
Izimpendulo eziyi-15 ziye ku- "INDEX OF CONTENTS"
Ngo-Ephreli, i-2018 ku
Kusihlwa okuhle, ungangitshela lapho ngingathola khona imigqa yemifula nemigwaqo yaseHonduras. Noma zivela emaphepheni okugcina kanye nakwi-geoportal ye-ICF.
kanzima lokho. Bangavela noma kukuphi ezweni lonke.
BUZA, Ngenzani STUDENT nemikhuba GEOMATICA, ME abahlinzeke izithombe zasemoyeni ethathelwe-GOOGLE EARTH, KODWA ukwazi indawo yakho, UKUTHI KUKHONA Ngaphezu KUYA EMEXICO, NJENGOBA ONGASE ukuthola indawo yakho?
Okthoba, i-2017 ku
Ngifuna ukukwazisa ukuthi ngephutha uthathe indawo yangasese eseCalle Pedro Echagüe Oeste N ° 149 futhi exhumana noCalle Sarmiento Norte lapho kunesango lobumfihlo, leli sayithi lisedolobheni laseSan Juan - Capital weSifundazwe saseSan Juan, eRiphabhuliki yase-Argentina. Ukuthi ayinasango ngomgwaqo uPedro Echagüe akusho ukuthi kusesidlangalaleni. Ngakho-ke, ngicela ukuthi kuthathwe izinyathelo zokuqapha ezidingekayo kuqala ukuthola ukuthi ngabe lokhu engikushoyo kuyiqiniso yini nokuthi ngabe kuyiqiniso, ngicela ukuthi izithombe ezisakazwa yiyo zisuswe.
Kwangathi, i-2017 ku
Ngesifanekiso sokuxosha. Engxenyeni ephezulu isixhumanisi.
indlela yokuguqula uhlu lwezinombolo zamadesimali eziqondiswa ku-utm
Novemba, i-2016 ku
Kufanele ube oqondile kakhulu.
Ngokuvamile, kuzodingeka unikeze uhlelo lokuxhumanisa,
khona-ke kuzodingeka uyisuse endaweni eyaziwayo, bese uyijikelezisa uma kudingeka.
Sithumele kumhleli we-geofumadas. com futhi sizoyichaza ngokuningiliziwe.
Ngingayithumela kanjani ifayela le-dxf elingekho kuzixhumanisi ngendlela efanele yezixhumanisi? Ngicabanga nge-microstation kulula ... kodwa angazi kanjani ..
NgoFebhuwari, i-2016 ku
Nginombuzo, njengoba ngenza ukuze ngithole amanani amancane angalingani ngokuqondene nenani le-contour.
Uma ukhuluma ngomthetho weHonduran:
- Ake sithi uqala inhlolovo yedolobha elisemadolobheni eminyakeni emibili: Yiziphi izindinganiso ezizosebenza? Uma zinezindinganiso futhi zingavumelani, kuzodingeka zisebenzise i-100%.
Yini okufanele unakekele i-ukuphikisa okungenzeka Superior iNkantolo mabhuku, uma ungenawo abonise ubufakazi amagugu ziphela, kungadinga ukuba ukuqoqa amagugu ngenxa 100%.
Isivumelwano sidlala indima, ukuze umthelela ungabi kakhulu, uma i-cadastre iqinisekisiwe.
Esinye isici, yiluphi uhlobo lwekharityhulam yamagugu yilabo abathi banakho? Ingabe izakhiwo, ngamanani wamanje? Ingabe ihlanganisa izindinganiso zomhlaba zasemadolobheni? Ingabe ihlanganisa izindinganiso zomhlaba zasemaphandleni nezitshalo ezihlala njalo?
Uma kungamabhuku amasha asanda kulungiswa, amanani abukeziwe. Ukuzisebenzisa kwi-100% kuzoba nomthelela ongemuhle, ngoba abantu, uma bejwayele ukukhokha nge-afidavithi, noma abangakaze bakhokhe, bazozwa ukushaya okunamandla. Lokhu esikhundleni sokuthola inzuzo, kuzonyusa okwenzekile, ngoba abantu bazoza kumasipala kuphela bazobona ukuthi kumele bakhokhe nini, futhi uma bazi ukuthi inani lizohamba lodwa.
Ngakho-ke, okufanele ukuhlelele kuyadingeka. Kokubili ukusekela ngaphambi kwe-TSC isenzo somkhandlu ovulekile, kanye nokuqeda umthelela wobuchwepheshe.
U-Yaredi Harobi Mejia Paredes uthi:
Kwamanye Omasipala sinezinhlu zamanani weminyaka emihlanu ye-2015-2019, kodwa-ke akukho cwaningo lwe-Urban technical cadastral, kuzobe kulungile ukuthi uMnyango weCadastre uqalise izinqubo zokuvumelana kwalawa maxabiso noma yini okuzoba yisinyathelo esingcono kakhulu ongasithatha, Emaphandleni lapho I-30% yocwaningo lobuchwepheshe, ukuthi yini okufanele uyenze ezimweni ezinjalo.
Novemba, i-2014 ku
Sawubona, inkampani engisebenza kuyo, inesifiso sokuthola i-drone, enamakhamera e-multispectral kanye ne-Photogrammetric, kufaka phakathi isoftware yokuhlela izindiza nokuhlaziywa kwezithombe, okuvumela ukuhlolwa kwezilimo nemfuyo ngokusebenzisa i-UAV Sizokwazi ngesikhathi sangempela isimo samapulazi ahlukahlukene ngenhloso yokuthuthukisa ukusebenza kwawo, ukuhlola ukulawulwa kwezinambuzane nezinhlobo kanye nekhwalithi yokunisela.
Ngingathanda ukuba nesiphakamiso sakho
banomkhuba othile okhomba emdwebeni cad umzila wezintambo noma i-polilineas noma i-Autocad noma i-MicroStation.
Ngikhipha ifayela le-google hearth kml nge-utm izixhumanisi (amaphuzu we-20) kanye nesikhombi kusixhumanisi ngasinye, i-ID8L980G 20.408165 -99.36207333 (isihlonzi, i-latitude, i-longitude), ifayela le-kml lakhiwa ku-utm 8L980G zone 14 Q 462223.62 XUMUMX X XUMUMX XUMUMX X XUMUMX X XUM Kodwa lapho ngiyiguqula ibe yi-disg autocad kunginika idatha emibili ehlukile ngakolunye uhlangothi isikhombi futhi ngakolunye uhlangothi kunginika amaphuzu, kwenzekani ??????